ချာဗင် ဒေ ဟွမ်းတား - ဝီကီပီးဒီးယား
ချာဗင် (ရှေးဟောင်းသုတေသန နယ်မြေ)*
ချာဗင် ဒေ ဟွမ်းတား သည် ပီရူးနိုင်ငံရှိ ရှေးဟောင်းသုတေသန နယ်မြေ တစ်ခု ဖြစ်ပြီး ဘီစီ ၁၂၀၀ ခန့်က အထိ တည်ဆောက်ခဲ့သော အပျက်အစီးများနှင့် လက်မှုအနုပညာ လက်ရာများ ပါဝင်ပြီး အင်ကာယဉ်ကျေးမှု မတိုင်ခင် ယဉ်ကျေးမှု ဖြစ်သော ချာဗင် တို့က ဘီစီ ၄၀၀-၅၀၀ ခန့် အထိ နေထိုင်ခဲ့ကြသော နေရာ ဖြစ်သည်။ ထိုနယ်မြေသည် လီမားမြို့၏ မြောက်ဘက် ၂၅၀ ကီလိုမီတာ (၁၆၀ မိုင်) ခန့် အကွာရှိ အန်းကက်ရှ်ဒေသတွင် တည်ရှိကာ အမြင့်ပေ ၃,၁၈၀ မီတာ (၁၀,၄၃၀ ပေ) ခန့်တွင် ရှိပြီး ကော်ဒီလဲယား ဘလန်ကာတောင်တန်း၏ အရှေ့ဘက် ကွန်ချူးကို့စ် တောင်ကြား၏ အစပိုင်းတွင် တည်ရှိသည်။ ချာဗင် ဒေ ဟွမ်းတားသည် ယူနက်စကိုမှ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာ အဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း ခံရသည့် နေရာ တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ချာဗင် ရှေးဟောင်းသုတေသန နယ်မြေမှ ရှေဟောင်းပစ္စည်းအချို့ကို လီမားမြို့ရှိ နာဆီယွန်ပြတိုက်တွင် လည်းကောင်း၊ ချာဗင်ရှိ မြူဆီယို နာဆီယွန်နယ် ဒီ ချာဗင် ပြတိုက်တွင်လည်းကောင်း ပြသထားသည်။
ချာဗင် ဒေ ဟွမ်းတားတွင် လူတို့ အခြေချ နေထိုင်ခဲ့ခြင်းကို ကာဗွန်ဒိတ်တင်း နည်းလမ်းဖြင့် သုတေသနပြုကြည့်သောအခါ အစောဆုံး ဘီစီ ၃၀၀၀ ခန့်ကပင် စတင်သည်ဟု တွေ့ရပြီး ပွဲလမ်းကျင်းပရာ ဗဟိုဌာနအဖြစ် အဓိက ရှိနေခဲ့သည်မှာ ဘီစီ ၂ ထောင်စုနှစ်အဆုံးမှ တဆင့် ဘီစီ ၁ ထောင်ခုနှစ်၏ တစ်ဝက်ခန့် အထိပင် ဖြစ်သည်။ လူဦးရေ၏ သိသာထင်ရှားသော အစိတ်အပိုင်း အတော်များများမှာ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး လုပ်ငန်းပေါ်တွင် အခြေတည်ကြသော်လည်း မြို့၏ တည်နေရာဖြစ်သော မာရာနွန်းမြစ်၏ ရေဝေကြောနေရာ နှင့် ကမ်းရိုးတန်းနှင့် သစ်တောကြားတွင် ဖြစ်သောကြောင့် အိုင်ဒီယာများ နှင့် ကုန်စည်များကို စုစည်း ဖြန့်ဝေရာ နေရာ ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုရှေးဟောင်းသုတေသန နယ်မြေသည် ပွဲလမ်းကျင်းပရာ ဗဟိုဌာနကြီး တစ်ခု ဖြစ်သဖြင့် ချာဗင် ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ များစွာ ဖော်ထုတ်ပြသ နေခဲ့သည်။ ချာဗင် ဒီ ဟွမ်းတားသည် ဒေသအတွင်းမှ ပြည်သူများ၏ စုစည်းဆုံတွေ့ရာ နှင့် အတူတကွ ဝတ်ပြုရာ နေရာ ဖြစ်ခဲ့သည်။  ထိုနေရာအား တောင်ကြား အငွေ့အသက်လွှမ်းမိုးနေသော အထိမ်းအမှတ် အဆောက်အဦး အဖြစ် ပြောင်းလဲခဲ့ခြင်းကြောင့် ရှုပ်ထွေးသော နောက်ဆက်တွဲ ရိုက်ခတ်မှုများ ရှိခဲ့သည်။ ထိုနေရာသည် ဒေသအတွင်းမှ ကျော်လွန်၍ အရေးပါသော နေရာ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ လူတို့သည် ချာဗင် ဒီ ဟွမ်းတားအား ဗဟိုဌာန တစ်ခု အဖြစ် လာရောက်ကြပြီး ထုံးတမ်းစဉ်လာ ရိုးရာ ပွဲလမ်းများကို တက်ရောက်ကြကာ ရှေ့ဖြစ်များကို မေးမြန်းကြပြီး ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းသို့ ဝင်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ 
ချာဗင် ဒေ ဟွမ်းတား တွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်များ အရ ဘီစီ ၅၀၀ နှင့် ဘီစီ ၃၀၀ ခုနှစ်ကြားတွင် လူ့အဖွဲ့အစည်း အတွင်း မတည်ငြိမ်မှုနှင့် ထကြွမှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ထိုအချိန်တွင်ပင် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော ချာဗင် ယဉ်ကျေးမှုလောကသည်လည်း ဆုတ်ယုတ်လာခဲ့သည်။ ကြီးမားသော ပွဲတော်ကျင်းပရာ နေရာကို စွန့်ပစ်ခဲ့ကြပြီး အချို့မှာ တည်ဆောက်ဆဲပင် ဖြစ်ကာ ထိုနေရာများကို ရွာများ နှင့် စိုက်ပျိုးမွေးမြူသည့် မြေများမှ အစားထိုး နေရာ ယူခဲ့သည်။ ချာဗင် ဒေ ဟွမ်းတားတွင် ဘီစီ ၅၀၀ ထက် နောက်မကျပဲ စက်ဝိုင်းပုံ ပလာဇာအား ရွာငယ်ကလေး တစ်ခုမှ အစားထိုး နေရာ ယူခဲ့သည်။ ထို ပလာဇာ နေရာအား အမျိုးမျိုးသော ယဉ်ကျေးမှုရှိသည့် အဖွဲ့များမှ ဆက်တိုက် နေရာ ယူခဲ့ကြပြီး ထိုရွာသားများမှာ အဆောက်အဦးမှ ကျောက်တုံးများ နှင့် ကျောက်ဆစ်လက်ရာများ ကို ဖဲ့ယူကြကာ အိမ်နံရံ အဖြစ် အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ အဆင့်ဆင့်သော နေထိုင်ရာ ကြမ်းခင်းများက ညွှန်ပြနေသည်မှာ ထိုရွာသည် ၁၉၄၀ ခုနှစ်များ အထိ ဆက်တိုက် နေထိုင်ခဲ့ကြသည်ကို ပြသနေသည်။
ချာဗင်ဒေသ နှင့် ချာဗင် ဒေ ဟွမ်းတား နယ်မြေ
↑ Burger, Richard L. 2008 "Chavin de Huantar and its Sphere of Influence", In Handbook of South American Archeology, edited by H. Silverman and W. Isbell. New York: Springer, pp. 681–706.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ချာဗင်_ဒေ_ဟွမ်းတား&oldid=520963" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၁ ဇွန် ၂၀၂၀၊ ၁၉:၄၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။